Focalin (ဖိုကာလင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Focalin (ဖိုကာလင်း)
Focalin (ဖိုကာလင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Focalin (ဖိုကာလင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Focalin (ဖိုကာလင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Focalin® သည် အဓိကအာရုံကြောစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသော အရာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်တက်ကြွခြင်းနှင့် စိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆိုင်သော ဦးနှောက်ရှိ ဓါတုပစ္စည်းများကို သက်ရောက်သည်။
Focalin® ကို အာရုံစိုက်မှုမရသော အလွန်တက်ကြွသော ရောဂါ (AHDH) အား ကုသရန် သုံးသည်။
Focalin® ကို ဆေးလမ်းညွှန်တွင် စာရင်းပြုမထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Focalin (ဖိုကာလင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Focalin® ကို မမှန်မကန် သုံးပါက သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးအပေါ် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆေးစာတွင်ပါသော ညွှန်ကြားချက် အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ သင့်ဆရာဝန်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤဆေးကို ညွှန်ကြားထားသည်ထက် ပိုများစွာ၊ ပိုနည်းစွာ သို့မဟုတ် ပိုပြီးကြာရှည်စွာ မသုံးပါနှင့်။
Dexmethylphenidate သည် အကျင့်ဖြစ်စေသည်။ Focalin® ကို အထူးသဖြင့် အရင်က ဆေးစွဲဖူးသော လူတစ်ယောက်အား မပေးပါနှင့်။ ဆေးကို အခြားလူများ မယူနိုင်သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ ဤဆေးကို ရောင်းခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်းသည် တရားဥပဒေနှင့် မညီပါ။
Focalin® ကို အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။ ဆေးပြားကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်သောက်ပါ။ အနည်းဆုံး ၄ နာရီခြား သောက်ပါ။ extended-release Focalin® XR ဆေးတောင့်ကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် မနက်ပိုင်းတွင်သောက်ပါ။
extended-release ဆေးတောင့်ကို မကြိတ်ချေပါနှင့်။ ဝါးမစားပါနှင့်။ မဖွင့်ပါနှင့်။ ဆေးတောင့် တစ်ခုလုံးကို မျိုချပါ။
မျိုချရ လွယ်ကူစေရန် Focalin® XR ဆေးတောင့်ကို ဖွင့်ပြီး ဆေးကို ပန်းသီးဆော့ထဲတွင် ဖြူးပါ။ မဝါးစားဘဲ ချက်ချင်း မျိုချပါ။ ဖျော်ရည်ကို နောက်မှအသုံးပြုရန် မသိမ်းပါနှင့်။
Focalin® သုံးနေစဉ် ဆရာဝန်ထံ ပုံမှန်သွားပြပြီး သင်၏ တိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း မကြာခဏ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
Focalin (ဖိုကာလင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Focalin® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Focalin® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ Focalin® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Focalin® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Focalin (ဖိုကာလင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Focalin® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
သင့်တွင်အောက်ပါတို့ ရှိပါက Focalin® မသောက်သင့်ပါ။
Tics ( ကြွက်သား တွန့်ရှုံ့ခြင်း) သို့မဟုတ် Tourette’s syndrome ဖြစ်ဖူးခြင်း သို့မဟုတ် မိသားစုတွင် ဖြစ်ဖူးခြင်း
ပြင်းထန်သော စိုးရိမ်ခြင်း၊ တင်းမာခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း (လှုံ့ဆော်သော ဆေးသည် ထိုလက္ခဏာများကို ပိုပြီးဆိုးစေသည်)
သင်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်က MAO inhibitor သောက်ထားပါက Focalin® မသောက်ပါနှင့်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဆေး ဓါတ်ပြုမှု ဖြစ်နိုင်သည်။ MAO inhibitors များမှာ isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine နှင့်အခြားဆေးများ ဖြစ်သည်။
အချို့ဆေးများသည် dexmethylphenidate နှင့် ဓါတ်ပြုပြီး serotonin syndrome ဟုခေါ်သော ဆိုးရွားသော အခြေအနေတစ်ခုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်သည် opioid ဆေးများ၊ ဆေးဖက်ဝင်များ သို့မဟုတ် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ် မကျန်းမာခြင်း၊ Parkinson’s disease, ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သော ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းတို့ အတွက် ဆေးများ၊ အော့အန်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသော ဆေးများ သောက်နေပါက ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ။ သင်ဆေးသောက်သော အချိန်၊ ဆေးသောက်ပုံ ကို ပြောင်းလဲမှု မလုပ်ခင် ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
လှုံ့ဆော်သော ဆေးများသည် လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြော ရုတ်တရက် ကျဉ်းခြင်း၊ အချို့လူများတွင် ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ သင့်တွင် အောက်ပါတို့ ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
နှလုံးရောဂါများ သို့မဟုတ် မွေးရာပါ နှလုံးချို့ယွင်းခြင်း
နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်း မိသားစု ရာဇဝင်
ဤဆေးသည် သင့်အတွက် ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေရန် သင် သို့မဟုတ် သင့်မိသားစုဝင်ထဲတွင် အောက်ပါတို့ ရှိဖူးပါက ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်မကျန်းမာခြင်း၊ စိတ်တက်ကြွမှု နှင့် စိတ်ဓါတ်ကျမှု တစ်လှည့်စီဖြစ်သော ရောဂါ၊ ပြင်းထန်သော စိတ်ဝေဒနာ၊ သေကြောင်းကြံလိုသော အတွေးများ၊ အပြုအမူများ
Motor tics ( ကြွက်သား တွန့်ရှုံ့ခြင်း) သို့မဟုတ် Tourette’s syndrome
ခြေထောက်နှင့်လက်တွင် သွေးလှည့်ပတ်မှု ပြဿနာများ
ပုံမမှန်သော ဦးနှောက်လှိုင်း စစ်ဆေးမှု (EEG)
ဆေး သို့မဟုတ် အရက်စွဲသော ရာဇဝင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Focalin (ဖိုကာလင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Focalin® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ် များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Focalin® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Focalin® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ (FDA) ၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
Focalin (ဖိုကာလင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သင့်တွင် Focalin® နှင့် ဓါတ်မတည့်သော လက္ခဏာများ ရှိပါက အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးအကူအညီ ရယူပါ။ အင်ပြင်များ၊ အသက်ရှူရ ခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
Focalin® သည် သင့်ကလေး၏ ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သင့်ကလေးသည် ဤဆေး အသုံးပြုနေစဉ် ပုံမှန်အတိုင်း မကြီးထွားပါက ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
နှလုံးရောဂါ လက္ခဏာများ – ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူရ ခက်ခြင်း၊ သတိလစ်တော့မည်ဟု ခံစားရခြင်း
ပြင်းထန်သော စိတ်ဝေဒနာ လက္ခဏာများ – ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ခြင်း ( အမှန်တကယ် မရှိသော အရာများကို မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း)၊ အပြုအမူ ပြဿနာများ၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ သံသယ လွန်ကဲခြင်း။
သွေးလှည့်ပတ်မှု ပြဿနာများ၏ လက္ခဏာများ – ထုံကျဉ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အေးခြင်း၊ ခြေချောင်းများ၊ လက်ချောင်းများတွင် ရှင်းမပြနိုင်သော ဒဏ်ရာများ သို့မဟုတ် အရေပြား အရောင် ပြောင်းလဲခြင်းများ ( ဖျော့တော့ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ပြာခြင်း)
အမြင်ဝေဝါးခြင်း၊ အခြား အမြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ
နာကျင်သော၊ ၄ နာရီနှင့်အထက် ကြာသော လိင်တံ ထောင်မတ်ခြင်း ( ရှားပါသည်)
Serotonin syndrome ၏ လက္ခဏာများ ရှိပါက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရှာဖွေပါ။ ဥပမာ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း၊ ခိုက်ခိုက် တုန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ ကြွက်သား တောင့်တင်းခြင်း၊ တွန့်ရှုံ့ခြင်း၊ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု မရှိခြင်း၊ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျှောခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Focalin (ဖိုကာလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Focalin® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
သွေးကျဲဆေး ဥပမာ warfarin (Coumadin, Jantoven)
ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေး ပါဝင်သော အအေးမိ သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်မှု ပျောက်ဆေး
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Focalin (ဖိုကာလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Focalin® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Focalin (ဖိုကာလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Focalin® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Focalin (ဖိုကာလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Focalin® ကို အနည်းဆုံး ၄ နာရီးခြားပြီး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သောက်နိုင်သည်။ Focalin® ကို အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။ လူနာ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် တုံ့ပြန်မှုအရ ဆေးပမာဏသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူပါ။
ကလေးတွေအတွက် Focalin (ဖိုကာလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Focalin (ဖိုကာလင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Focalin® ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ဆေးပြား၊ dexmethylphenidate hydrochloride ၂.၅ မီလီဂရမ်
Focalin® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Focalin®.http://www.rxlist.com/focalin-drug.html. Accessed August 24, 2017